1. ဧပြီလ ၂၅ရက်နေ့ ၇ရက်သားသမီး ဗေဒင်
2. ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့အတွက် ရာသီခွင်အလိုက်ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
3. ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ ပျိုရွယ်သူတို့အတွက် ချစ်ရေးချစ်ရာ ဘ၀တွက်တာဗေဒင်
1. Ricky Martin ရဲ့တေးအယ်လ်ဘမ်အသစ်မှာပါဝင်မယ့် Red Velvet အဖွဲ့မှ Wendy
1. သစ်တစ်ပင်ကောင်း - Chapter 1
2. အဝိဇ္ဖာတောလား - အစ/အဆုံး
သမိုင်းဝင်ပထဝီစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော့်အဘိုးရဲ့ မိတ်ဆွေ အဘိုးကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ စာကြည့်ခန်းထဲမှာ တွေ့ခဲ့ဖူးတာပါ။ ကျွန်တော့်အဘိုးရဲ့ မိတ်ဆွေ အဘိုးကြီးဟာ သူ့ဖခင်ဆီက အမွေဆက်ခံ ထိန်းသိမ်း ထားခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သမိုင်းဝင်ပထဝီ စာအုပ်ဟာ စက္ကူတွေက ဝါကျင်ကျင် ဖြစ်နေပေမယ့် စာလုံးတွေကို ထင်ထင်ရှားရှား ဖတ်ရှုလို့ ရနေတုန်းပါပဲ။ ကမ္ဘာမြေကြီး တည်ရှိနေပုံ အစောဆုံး ပုံကြမ်းကိုလဲ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ တွေ့ကြရတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သူ့ကို သမိုင်းဝင်ပထဝီစာအုပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ကို ကူဗလိုင်ခန် လက်ထက်မှာ ပုံနှိပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ တချို့သုတေသီတွေကတော့ မန်ချူးဧကရာဇ် လက်ထက်မှာ ပုံနှိပ်ခဲ့ကြတာလို့ ဆိုကြရဲ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူဟာ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ပါ။ သူ့မှာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ရှားပါးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြထားတယ်။ ကုန်းမြေတည်နေပုံနဲ့ ရေပြင်တည်နေပုံကို ရှင်းလင်း ဖော်ပြထားပြီး ကုန်းမြေရဲ့ မြေသားနဲ့ ကျောက်လွှာများအကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ခေတ် ကမ္ဘာ့မြေပုံထဲက မြင့်မားတဲ့ တောင်တန်းကြီး တစ်ခုကို သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ ပင်လယ်ရေအောက် ကြမ်းပြင်အဖြစ် တွေ့ကြရတယ်။ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ ကမ္ဘာ့မြေသားပြင်ရဲ့ အလယ်ဗဟိုက အရည်ပျော်နေတဲ့ သတ္တုတွေအကြောင်း ဖော်ပြထားတယ်။ ပေါက်ကွဲပျက်စီးသွားတဲ့ မီးတောင် (၃၂)လုံးနဲ့ မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ မီးတောင် (၁)လုံး အကြောင်းကိုလည်း သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ရှုနိုင်တယ်။ ပေါက်ကွဲပြီးစီးသွားတဲ့ မီးတောင်တွေထဲမှာ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံပေါက်ကွဲဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ မီးတောင်တွေလဲ ပါသတဲ့။ လုံးဝ မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ မီးတောင်(၁)လုံး ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှတယ်။ အဲဒီမီးတောင်ဟာ ဧရာမ ရေပြင်ကြီးတစ်ခုရဲ့ အောက်မှာ ငုပ်လျှိူးတည်ရှိသတဲ့။ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ အဲဒီမီးတောင်ဟာ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဧကန်မုချ ပေါက်ကွဲ နိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒီမီးတောင်ကြီး ပေါက်ကွဲခဲ့ရင် ဆဲလ်တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ သက်ရှိကလေးတွေကစလို့ ဧရာမ ရေသတ္တဝါကြီးတွေပါ သေကျေ ပျက်စီးနိုင်သတဲ့။ ဒါပေမဲ့ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ကို ပုံနှိပ်ခဲ့တဲ့ နှစ်အထိတော့ အဲဒီမီးတောင်ဟာ အလွန် အေးစက်နေဆဲပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ သမိုင်းဝင်ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ ကုန်းမြေပေါ်က သစ်တောတွေ အကြောင်းကိုသာမက ရေအောက်က သစ်တောတွေ အကြောင်းပါ ဖော်ပြထားတယ်။ ရေအောက်သစ်တောထဲမှာ အပင်ဆိုလည်းဟုတ် အကောင်ဆိုလည်း ဟုတ်တဲ့ သက်ရှိတွေ ပါဝင်နေတယ်။ လူသူရောက်ရှိဖို့ အလွန်ဝေးလံ ခက်ခဲတဲ့ နေရာဒေသ အကြောင်းအရာတွေကို သမိုင်းဝင်ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ တွေ့ရတယ်။ တချို့သုတေသီတွေက သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ပါ အချက်အလက် တချို့ကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့် တချို့သုတေသီတွေကတော့ ဒီအချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ ခေတ်မှာ လက်ခံနေရပါပြီလို့ ဆိုကြပြန်တယ်။ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ ကုန်းမြေပေါ်က သစ်တောကြီးတွေ အကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားတယ်။ ကမ္ဘာဦး လူသားတွေကို ကောင်းစွာရှင်သန် ကြီးပြင်းစေခဲ့တဲ့ သစ်တောကြီးတွေ ဖြစ်သတဲ့။ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ တောင်တွေကို တိုင်းတာ ရေတွက်ပြထားပေမယ့် ကိန်းဂဏန်းတွေဟာ ပညာရှင်တွေကို အငြင်းအခုံ ဖြစ်စေတယ်။
သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ဟာ တစ်ချိန်က အလွန်ဥာဏ်ရည်မြင့်တဲ့ သက်ရှိမျိုးစိတ်တစ်ခုက ရေးသားခဲ့တာလို့ ယုံကြည်ကြ သူတွေ ရှိတယ်။ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ လျှိူ့ဝှက်သိမ်းဆည်းခြင်း ခံခဲ့ရတယ်လို့လည်း သူတို့က ဆိုကြတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အလွန်ပူအိုက်တဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ကို ကျွန်တော် မြင်တွေ့ခွင့် ရခဲ့တာပါ။ ဘိုးဘေး အစဉ်အဆက်ဆက်က လျှိူ့ဝှက်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်တာကြောင့် သူ့ကို သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ အက္ခရာတွေကို ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်ဟာ ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် စိတ်အဝင်စားဆုံးကတော့ သမိုင်းဝင် ပထဝီစာအုပ်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ အေးစက်စက် မီးတောင်တစ်လုံး အကြောင်းပါပဲ။